दमरोग कसरी हुन्छ ? लक्षण, उपचार, जान्नै पर्ने कुरा (भिडियो सहित) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
दमरोग कसरी हुन्छ ? लक्षण, उपचार, जान्नै पर्ने कुरा (भिडियो सहित)
३१ जेष्ठ २०७३, सोमबार ००:००
डा. दिलजान मंसूरले दमरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोखानीसँग गरेको कुराकानी
अहिले हाम्रोमा दमका बिरामीहरू बढिरहेको पाउँछौं । हस्पिटलमा पनि हामीले अन्य बिरामीभन्दा दमका बिरामी बढिरहेको पाउन सक्छौं । खासगरी जाडो महिनामा दमका बिरामी बढ्छन् । दम धेरै किसिमका हुन्छन् । दम कुनै एउटा रोग होइन, यो त एउटा लक्षण मात्रै हो । साधारणतः वृद्धहरूलाई श्वास–प्रश्वास बढिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई हामीले दम मान्छौं । तर, दम त एउटा सानो बच्चालाई पनि हुन सक्छ ।
सामान्य भाषामा दम भनेको सास फेर्न गाह्रो हुने अवस्था हो ।
विभिन्न किसिमका फोक्सोका रोगले गर्दा श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ । आश्माको रोग छ भने, सानो बच्चाहरूमा पनि श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । ब्रोन्किअल आश्मा अर्कै रोग हो । त्यस्तै, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भन्ने रोग छ, यो चुरोट खाँदा, आगोको धुँवामा बस्दा वा वातावरणीय प्रदूषणका कारण लाग्छ सक्छ । यस्तै, विभिन्न किसिमका रोग फोक्सोमा लाग्छन्, जस्तो क्षयरोगलाई पनि लिन सकिन्छ । क्षयरोगले धेरै किसिमले फोक्सोलाई कमजोर बनाएको हुन्छ । पछि गएर क्षयरोगको बिरामीलाई पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
प्रायः नेपालीलाई क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भएर दम हुन्छ । किनभने, यो चुरोट खाने, चुलोको धुँवामा बस्नेलाई बढी हुन्छ । र, वातावरणीय प्रदूषणले पनि बढी हुन्छ । योबाहेक सानोमा छातीको संक्रमण वा क्षयरोग रोग हुनेलाई पनि पछि गएर दम हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै, फोक्सोमा अन्य विभिन्न रोग लाग्न सक्छन् । यस्ता रोगले फोक्सो बिगारेको छ भने सुरुमा खोकी लाग्ने, खकार आउने हुन्छ, पछि गएर दम हुने सम्भावना बढ्छ ।
फोक्सोको सरुवा रोगको कारण पनि धेरैलाई दम हुन सक्छ । त्यस्तै, कसैलाई वंशाणुगत कारण पनि दम हुन हुन्छ । यसरी हेर्दा चुरोट खानेलाई र धुँवा, धुलो प्रदूषणमा बस्नेलाई दम हुन सक्छ । त्यस्तै, धुँवाजन्य र धुलो हुने कारखानामा काम गर्नेलाई पनि पछि गएर दम हुन सक्छ । त्यस्तै, मुटुको रोगले गर्दा पनि बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
चुरोट खानेलाई मात्रै होइन, अम्मलीको वरिपरि बस्नेलाई पनि दमरोग हुन सक्छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाले चुरोट खान्छिन् भने बच्चालाई पनि दम हुने सम्भावना रहन्छ ।
दमको मुख्य लक्षण खोकी लाग्ने, खोक्दा खकार निस्कने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । सुरुमा हिँड्दा, उकालो–ओरालो गर्दा श्वास बढ्छ । पछि गएर बसिरहँदा पनि श्वास बढ्न सक्छ । त्योबाहेक कसैकसैलाई छातीमा दुख्ने पनि हुन सक्छ । दम भएका मानिसलाई खोक्दा रगत आउने पनि हुन्छ । क्रोनिक ब्रोन्काइटिस रोगमा रगत आउँछ ।
क्षयरोगले फोक्सो बिग्रेको छ भने पनि खोक्दा रगत आउन सक्छ । त्यस्तै, साना ट्युमर, क्यान्सरले पनि खोक्दा रगत आउन सक्छ । खकारमा रगत देखियो भने त्यसलाई सहज रुपमा लिनु हुँदैन, चेकजाँच गराउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ धेरै खोक्दा सामान्य रुपमा घाँटीबाट मात्रै पनि रगत आएको हुन सक्छ, तर चेकजाँच त गराउनैपर्छ ।
त्यस्तै, कहिलेकाहीं छातीमा पानी जमेर पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, तर वास्तविकता पत्ता लगाउन शरीरको चेकजाँच गराउनुपर्छ । चेकजाँच विभिन्न किसिमका हुन्छन् ।
दमको उपचार रोग हेरेर हुन्छ । विभिन्न किसिमका रोगका कारण श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएकाले पहिले कुन रोगका कारण श्वास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यस रोगको उपचार गर्नुपर्छ ।
दमका रोगीले खाने, पिउने, सुँघ्ने औषधि पाइन्छ । अहिले कति बिरामीको गलत धारणा छ कि औषधिले बानी पर्छ कि भन्ने । जस्तो, औषधि खाएका बेला वा सुँघेका बेला मात्रै निको हुने हो कि भनेर ठान्ने । तर, कतिपय रोग औषधि खाएर सुँघेर पूरै निको हुन सक्छ ।
दम छातीकै रोगका कारण हुने हो । त्यसैले सानोमा छातीको संक्रमण देखियो भने त्यसमा पूर्ण उपचार गराउनुपर्छ । त्यस्तै, धुलो, धुँवाबाट बच्नुपर्छ । दाउराको चुलो छ भने धुँवा बाहिर जाने गरी बनाउनुपर्छ । धुलोमा हिँड्दा, काम गर्दा माक्स लगाउन सकियो । त्यस्तै, चुरोट खानु हुँदैन र चुरोट खानेको वरिपरि बस्नु पनि राम्रो होइन । सामान्यतः फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न सकियो भने दमरोगबाट बच्न सकिन्छ । फोक्सो मात्रै होइन, हामीले शरीरको सम्पूर्ण भाग, अंगलाई स्वस्थ राख्नैपर्छ ।
दमरोगको मात्रै कुरा गर्दा छातीको कुनै संक्रमण देखियो भने चेकजाँच गराएर डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधोपचार गराउनुपर्छ । औषधि खाने, सुँघ्ने विधि जान्नुपर्छ । निरोगी मानिसले कुनै पनि रोगबाट जोगिन खानपान, व्यायाम र आफ्नो वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: Jun 13, 2016